Teratany ao Arzantina Maneho Fandàvana ny Tsimatimanota Sitrahan’ireo Heloka Bevava Nandritry ny Fitondrana Jadona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Mey 2017 15:59 GMT
Fon'ny hetsika fanoherana ny 2 x 1 ho an'ireo vonomoka, tao amin'ny Kianja Plaza de Mayo ao Buenos Aires. Sary an'i Nuevo Encuentro, nozaraina ho an'ny daholobe tao amin'ny Facebook.
Ny Alarobia 10 May teo, nanao diabe ireo teratany Arzantina tany amin'ny tanàndehibe rehetra tao amin'ny firenena mba hanoherany ny fampiharana ilay fanenantsazy fantatra amin'ny hoe “roa ho an'ny iray” (2X1) ho an'ny miaramila voaheloka noho ny heloka bevava natao tamin'ny zanak'olombelona nandritry ny jadona miaramila farany tao Arzantina. Ilay didy dia manondro fifanarahana iray efa tranainy ao amin'ny zotram-pitsarana ady heloka ao Arzantina natao hampihenana ny isan'ny olona tazonina any am-ponja tamin'izany fotoana izany, ary napetrak'ireo teo amin'ny fitondrana tamin'izany ny hoe ireo mpifonja tsy mbola nandalo fitsarana tao anatin'ny taona roa mahery nifonjàny dia manana zo hitaky fanonerana amin'ny fanjakana, amin'ny fitondrana ny raharahany eny anatrehan'ny fitsaràna hitakiana ny onitra avo roa heny amin'izay fotoana nitazonana azy tsy nisy fiampangàna”.
Ho an'ireo manohitra azy io, ny loza aterak'io didy io dia ny mety hahafahan'ireo rehetra nandray anjara tao anatin'ilay herim-pamoretan'ny governemanta. Ao anatin'ny lahatsary eto ambany, novokarin'ny vondrona Emergentes, voafintina ao ny dikan'ny tsy fahatomombanan'izy io ho an'ireo vahoaka, ary ny antony handàvany azy:
Ilay didy miteraka resabe izay nolanian'ny maro an'isa tao amin'ny Fitsarana Antampony tamin'ny 3 May 2017 dia manome tombony ho an'i Luis Muiña, mpiaraka tomponandraikitra tamin'ilay heloka bevava “tsy ara-dalàna naneriterena ny fahalalahana izay vao mainka niharatsy noho ny fampiasany herisetra sy fandrahonana”. Ao anaty firenena iray izay tsy mbola mikatona akory ny fery nateraky ny fitondrana jadona, ny didy tahàka io dia noraisina ho toy ny famafàna miadana ho an'ireo izay nitolona ho an'ny rariny efa taompolo efatra no mihoatra. Tsy niandriandry ny valinkafatr'ireo fikambanana mpiaro zon'olombelona, ireo antoko politika sy olompirenena, na teny an'arabe na tany anaty haino aman-jery sosialy, toerana ahatsapàna ireo hatezerana any anatin'ireo bitsika nampiasa ny tenifototra toy ny hoe #Noal2x1 sy #Noal2x1aGenocidas:
#NOal2x1aGenocidas..Tsy misy zavatra hafa intsony azon'ity firenena ity omena…..azafady, tsy rariny impiry!!
Hihetsika miaraka isika ny Alarobia izao miaraka amin'ireo fikambanana DD.HH. mba haneho fa mijoro ity tanàna ity #Noal2x1 #NoAl2X1Genocida
#NOal2x1aGenocidas “Tsy hiverin-dàlana amin'ny resaka zon'olombelona i Arzantina. Tsy afaka ny hameno ny arabentska ny hafatry ny tsy fizakànkeloka
Naka an-keriny ry zareo, nampijaly, nanolana, namono, nangalatra zaza, niketrika fahantrana. Tsy misy vonomoka ho ariana fotsiny izany #MisionesPresente#NoAl2x1AGenocidas
Ny torolàlana ankapobeny, ka isan'izany ny antso, dia nazava tsara : “Tsy ilaina na ny fanadinoana, na ny famelankeloka, na ny fampihavanana”, ary ireo mosara fotsy, endrika anehoana ireo Reny tao Plaza de Mayo, no nibahan-toerana tamin'ìlay hetsika. Ireto ny sasany tamin'ireo sarinà diabe natevina nozarain'ny vondrona Emergentes:
Ny tao afovoan'i Buenos Aires, feno mosara fotsy. Sary an'ny Emergentes, nahazoana alàlana ny fampiasàna azy
Diabe fanoherana ny 2×1 ho an'ireo vonomoka tao Buenos Aires. Sary an'ny Emergentes, fampiasàna nahazoana alàlana.
Diabe fanoherana ny 2×1 ho an'ireo vonomoka, tao afovoan-tanànan'i Buenos Aires. Sary an'ny Emergentes, fampiasàna nahazoana alàlana.
Hetsika an'ohatra nanehoana ireo niharan'ny fanjavonana an-terisetra nandritry ny fitondrana jadona. Sary an'ny Emergentes, fampiasàna nahazoana alàlana
Nolavin'i Claudio Avrujla, Sekretera misahana ny Zon'Olombelona, ny fitsabatsabahan'ny sampana mpanatanteraka amin'ny raharahan'ny rafi-pitsarana, tamin'ny nilazàny fa ho hadisoana ny hampifanjevo ny fitsarana amin'ny fanapahankevitry ny governemanta : “Ny zavatra voalohany navoitranay dia ny fanajàna ny fahaleovantenan'ny fahefana. […] Tsy manan-draharaha iraisany amin'ny fandavantena tsy azo hozongozonina amin'ny tolona atao amin'ny tsy fizakànkeloka / tsimatimanota izany”.
Iny andro nanaovana ny diabe iny ihany ny filoha ao Arzantina, Mauricio Macri dia nilaza ny fandàvany ny 2×1 tao anaty fihetsika iray izay noheverin'ny maro fa “tara”. Nandritra izany fotoana izany, namoaka lalàna iray ny Antenimieran-doholona, tany amboalohany dia lany tamin'ny marimaritra nandritry ny fotoam-pivoriana maika iray tao amin'ny Anteniemieran'ireo Solombavambahoaka, izay mametra ny fetra iasàny sy manakely ny fampiharana azy ho an'ireo olona fantatra fa meloka taminà heloka bevava fanaovana vonomoka, na heloka an'ady.
Ireo Renibe tao Plaza de Mayo tao amin'ny fotoam-pivorian'ny Antenimieran-doholona izay nampiatoana ny tombontsoa azo amin'ilay 2×1 ho an'ireo fantatra fa meloka manoloana ny zanak'olombelona. Sary an'ny Emergentes, fampiasàna nahazoana alàlana
Na teo aza ny hafainganan'ny famoahana ilay lalàna sy ny fanazavana avy amin'ny Sekretera misahana ny Zon'Olombelona, tsy nanatsara endrika ny filoha Mausicio Macri mihitsy ity herinandron'ny fanoherankevitra ity manoloana ireo fifidianana solombavambahoaka izay ho atao amin'ny Oktobra 2017, ary ampio amin'ity ny fihilangilanana faobe amin'ny sehatra iray manandanja eo amin'ny fiarahamonina Arzantina izay efa nampiseho sahady ny fanilihany ireo politikam-panjakana marobe nampiharina nandritry ny 16 volana naha-teo ny governemanta.